मेरा सबै फिल्ममा प्रतिबन्ध लाग्नुपर्छ: ट्विंकल खन्ना आइतबार, भदौ २४, २०७५
सन् १९९० को दशककी चल्तापुर्जा बलिउड अभिनेत्री ट्विंकल खन्नाले आफूले अभिनय गरेका सबै फिल्महरु प्रतिबन्धित हुनुपर्ने बताएकी छन् ।
अहिंसाका हिमायती शनिबार, भदौ २३, २०७५
श्रद्धा कपुर अभिनित 'स्त्री' ले एक सातामा ६० करोड कमायो शुक्रबार, भदौ २२, २०७५
राजकुमार राव र श्रद्धा कपुर अभिनित फिल्म 'स्त्री' ले प्रदर्शनको एक साता पुगिसक्दा पनि दर्शकको साथ लगातार पाइरहेको छ। हररका साथै कमेडी दृश्य पनि रहेको फिल्मले भारतीय बक्स-अफिसमा प्रभाव जमाइरहेको छ।
कृष्णसार शिकार प्रकरणमा सलमान खानलाई अदालतले दियो राहत विहीबार, भदौ २१, २०७५
बलिउड अभिनेता सलमान खानलाई सन् १९९८ मा भएको कृष्णसारको शिकार प्रकरणमा जोधपुर अदालतले केही राहत दिएको छ। यसअघि अदालतले सलमानलाई विदेश यात्रामा जानुअघि हरेक पटक अदालतसँग अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखेकोमा अबदेखि अनुमति लिनु नपर्ने भएको छ।
द भ्वाइस अफ नेपाल र हाम्रो पात्रोबीच सहकार्य बुधबार, भदौ २०, २०७५
हाम्रो पात्रोले सिङ्गिङ् रियालिटी शो 'द भ्वाइस अफ नेपाल' लाई एप मार्फत पनि दर्शक सामु पुर्‍याउने भएको छ ।
माधुरी दीक्षित र सञ्जय दत्त २१ वर्षपछि फिल्ममा देखिंदै बुधबार, भदौ २०, २०७५
निर्देशक करण जौहरको लगानीमा बन्ने मल्टिस्टार फिल्म 'कलंक' दर्शकका लागि बहुप्रतीक्षित बनेको छ। फिल्ममा २१ वर्षपछि माधुरी दीक्षित र सञ्जय दत्त एकसाथ देखिने भएपछि यो जोडीलाई पर्दामा हेर्ने व्यग्रता बढेको छ।
२७ वर्षपछि 'सडक' फिल्मको सिक्वल बन्दै, सञ्जय दत्त र पूजा भट्ट दोहोरिने बुधबार, भदौ २०, २०७५
सन् १९९१ मा महेश भट्टको निर्देशनमा बनेको रोमान्टिक थ्रिलर फिल्म 'सडक' को सिक्वल निर्माण हुने भएको छ। निर्देशक भट्टले उक्त फिल्मको सिक्वल बनाउने विचार गरिरहेको भनेर लामो समयदेखि खबर आइरहे पनि अन्तत: उनले 'सडक २' बनाउने निर्णय गरेका छन्।
ग्लामरपछि पनि कलाकार एक्लो रहन्छ: शाहिद कपुर सोमबार, भदौ १८, २०७५
बलिउड अभिनेता शाहिद कपुरले लोकप्रियता, ग्लामर र प्रशंसा जस्ता कुरा सपनामा मात्र राम्रो लाग्ने बताएका छन्। वास्तविकतामा ती कुराले खुशी नदिने उनको भनाइ छ ।
श्रद्धाको 'स्त्री' ले तीन दिनमै लगानी उठायो सोमबार, भदौ १८, २०७५
राजकुमार राव र श्रद्धा कपुर अभिनीत हरर कमेडी फिल्म 'स्त्री' प्रदर्शनको तीन दिनमै आफ्नो बजेट उठाउन सफल भएको छ । करीब ३० करोड भारुमा बनेको फिल्ममा ३१ करोड २६ लाख कमाएको छ । फिल्मले माउथ पब्लिसिटीबाट दर्शक बटुलिरहेको छ।
इम्तियाज अलीले राधा-कृष्णको कथामा फिल्म बनाउने आइतबार, भदौ १७, २०७५
बलिउड फिल्म मेकर इम्तियाज अलीले राधा-कृष्णको विषयमा फिल्म बनाउने भएका छन् ।
नक्कली बन्दुकका कारण अमेरिकी अभिनेत्रीको मृत्यु आइतबार, भदौ १७, २०७५
२१ मंसिरदेखि किम्फ, तीनसय ६० फिल्मको आवेदन शनिबार, भदौ १६, २०७५
काठमाडौं इन्टरनेशनल माउन्टेन फिल्म फेस्टिभल (किम्फ) को १६ औं संस्करण २१–२५ मंसिरमा हुने भएको छ । फेस्टिभल काठमाडौंको कुमारी हलमा हुनेछ ।
एउटा फरक इतिहास शनिबार, भदौ १६, २०७५
नन्दिता दासको फिल्म 'मन्टो' मा ऋषि कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जावेद अख्तरले पारिश्रमिक लिएनन् शनिबार, भदौ १६, २०७५
'गोल्ड' बन्यो साउदी अरबमा रिलिज हुने पहिलो बलिउड फिल्म शुक्रबार, भदौ १५, २०७५
आलिया, दीपिका जस्ता कलाकारसँग डर लाग्छ : अमिताभ बच्चन विहीबार, भदौ १४, २०७५
'डा. गुलाटी'ले प्रियंका चोपडासँग काम गर्ने विहीबार, भदौ १४, २०७५
कहिले गुत्थी त कहिले डा. मशहूर गुलाटी बनेर टेलिभिजनका दर्शकको मनमा विशेष छाप पारेका भारतीय कमेडियन सुनील ग्रोवरको व्यस्तता पछिल्लो समय ठूलो पर्दामा बढेको छ ।
आमिर खानको 'ठग्स अफ हिन्दुस्तान' को भव्य रिलिजका लागि यशराज फिल्म्सको तयारी बुधबार, भदौ १३, २०७५
शाहरुख खानका छोरा र श्रीदेवीकी छोरी बलिउडमा एकसाथ डेब्यू गर्दै मंगलबार, भदौ १२, २०७५
स्टारका छोराछोरीलाई बलिउडमा भित्र्याउने करण जौहरले अर्को जोडीलाई डेब्यू गराउने तयारी गरेका छन्। करणले शाहरुख खानका छोरा आर्यनलाई बलिउडमा डेब्यू गराउन लागेका हुन्। उक्त फिल्ममा श्रीदेवीकी कान्छी छोरी खुशी कपुरले पनि डेब्यू गर्नेछिन्।
बक्स-अफिसमा भिड्दै 'स्त्री' र 'यमला पगला दिवाना' मंगलबार, भदौ १२, २०७५
आउँदो शुक्रबार ३१ अगस्टमा हरर कमेडी फिल्म 'स्त्री' र कमेडी फिल्म 'यमला पगला दिवाना फिर से' एकसाथ प्रदर्शनमा आउने भएका छन् ।
निहारिकाको याेगमायालाई मदन पुरस्कार र शान्तदास मानन्धरलाई जगदम्बा–श्री सोमबार, भदौ ११, २०७५
मदन पुरस्कार गुठीले २०७४ सालको मदन पुरस्कार निलम कार्की निहारिकाको उपन्यास योगमायालाई र जगदम्बा–श्री शान्तदास मानन्धर लाई अर्पण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
'रेस ३' खेल्नु अघि सबैले बेवास्ता गरे: बबी देओल सोमबार, भदौ ११, २०७५
बलिउड अभिनेता बबी देओलले आफ्नो कठिन परिस्थितिमा कसैले पनि आफूसँग काम गर्न रुचि नदेखाएको बताएका छन् ।
घर-घर क्यासेट बेच्थे 'फेशन'का निर्देशक मधुर भण्डारकर आइतबार, भदौ १०, २०७५
बलिउडका विशिष्ट फिल्ममेकर मधुर भण्डारकर यथार्थवादी फिल्मका लागि चिनिन्छन्। उनले 'पेज थ्री', 'चाँदनी बार', 'हिरोइन' र 'फेशन' जस्ता फिल्म बनाएका छन्। २६ अगस्ट १९६८ मा मुम्बईको महाराष्ट्रमा जन्मिएका उनी करीब १६ वर्षको छँदा मुम्बईको खार इलाकामा भिडियो क्यासेट पसल चलाउँथे।
आलियाको फिल्म छनोटप्रति पिता महेश भट्ट दंग आइतबार, भदौ १०, २०७५
बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्ट पछिल्लो समय काम गरेका फिल्महरुमा निकै फरक-फरक भूमिकामा देखिइन्। फिल्म 'राजी' मा जासुस बनेकी उनले 'उडता पञ्जाब' मा बिहारी युवतीको भूमिकामा अभिनय गरिन्।
डेंगूका कारण काजोल अभिनित 'हेलिकप्टर इला' को प्रदर्शन मिति सर्‍यो शनिबार, भदौ ९, २०७५
बलिउड अभिनेत्री काजोल अभिनीत फिल्म 'हेलिकप्टर इला' को प्रदर्शन मिति सारिएको छ। फिल्मका निर्देशक प्रदीप सरकार डेंगू रोग लागेर अस्पताल भर्ना भएपछि प्रदर्शन मिति धकेलिएर अक्टोबरमा सारिएको हो । यसअघि फिल्म ७ सेप्टेम्बरमा प्रदर्शन गर्ने भनिएको थियो ।
बलिउडमा अब कुनै आशा बाँकी छैन : अभिनेता नसिरुद्दीन शाह शुक्रबार, भदौ ८, २०७५ विस्तृत
यादव खरेलका सांस्कृतिक सृजना मदन पुरस्कार पुस्तकालयमा विहीबार, भदौ ७, २०७५
चलचित्र निर्देशक एवं गीतकार यादव खरेलले आफ्ना सम्पूर्ण साहित्यिक र सांस्कृतिक सृजना संरक्षणका लागि मदन पुरस्कार पुस्तकालयलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।
पिता धर्मेन्द्रको बायोपिक बनाउन लेखक र निर्देशक खोज्दै सनी देओल विहीबार, भदौ ७, २०७५
बलिउड अभिनेता सनी देओलले आफ्ना पिता तथा वरिष्ठ अभिनेता धर्मेन्द्रको बायोपिक बनाउने इच्छा रहेको बताएका छन्। यसका लागि राम्रो लेखक र निर्देशकको खोजीमा रहेको उनको भनाइ छ।
अमिताभ बच्चनभन्दा बढी पारिश्रमिक लिन्थे साउथ सुपरस्टार चिरञ्जीवी बुधबार, भदौ ६, २०७५
एक समय दक्षिण भारतका फिल्म स्टार चिरञ्जीवीको स्टारडम यस्तो थियो कि उनले भारतीय दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चनभन्दा बढी पारिश्रमिक पाउँथे। अमिताभको एउटा फिल्मको पारिश्रमिक एक करोड भारु हुँदा चिरञ्जीवी डेढ करोड लिन्थे।
क्यान्सरबाट बलिउड अभिनेत्री सुजाताको निधन मंगलबार, भदौ ५, २०७५
श्रीदेवीसँग 'इंग्लिश विंग्लिश'लगायत राँझणा, गुजारिशजस्ता फिल्ममा अभिनय गरेकी बलिउड अभिनेत्री सुजाता कुमारको ५३ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ।
नेपथ्य फेरि लण्डनमा मंगलबार, भदौ ५, २०७५
नेपथ्य तेस्रोपटक बेलायतमा प्रस्तुत हुनेभएको छ । पाँच वर्षअघि विम्बले एरेनामा ऐतिहासिक प्रस्तुति दिएको नेपथ्यले तीन वर्षअघि लण्डनकै ओ टु एकेडेमी ब्रिक्सटनमा प्रस्तुत भएको थियो । नेपथ्यले फेरि आफूलाई ओ टु एकेडेमीमै उभ्याउँदैछ ।
कुनै समय होटलमा भाँडा माझ्ने रणदीप हुडाको बलिउड यात्रा सोमबार, भदौ ४, २०७५
बलिउड अभिनेता रणदीप हुडाले प्रभावशाली अभिनयबाट सबैलाई प्रभावित पारेका छन् । उनले सन् २००१ मा 'मनसुन वेडिङ' फिल्मबाट करिअरको सुरुवात गरेका थिए ।
म लोभी कलाकार हुँ: राजकुमार राव सोमबार, भदौ ४, २०७५
राजकुमार रावले अभिनयको बलमा बलिउडमा खास स्थान बनाएका छन् । उनले बताए अनुसार उनी हरेक पटक सोच्छन्, वर्षामा दुई भन्दा बढी फिल्म नखेल्ने ।
'पद्मावत' पछि दीपिकालाई भन्सालीकै अर्को फिल्ममा मौका आइतबार, भदौ ३, २०७५
अभिनेत्री दीपिका पादुकोण सञ्जय लीला भन्सालीको नयाँ फिल्ममा देखिने खबर पछिल्लो समय बलिउडमा चर्चामा छ । उनले भन्सालीले नै निर्देशन गरेको 'पद्मावत' पछि कुनै फिल्ममा साइन गरेकी छैनन्।
ऋतिक रोशनको ‘सुपर ३०’ को प्रदर्शन मिति तय, ३ फिल्मसँग भिड्ने आइतबार, भदौ ३, २०७५
बलिउड अभिनेता ऋतिक रोशन अभिनीत नयाँ फिल्म ‘सुपर ३०’ को सुटिङ पूरा भएसँगै रिलिज मिति तोकिएको छ। फिल्म आगामी वर्षको जनवरीमा रिलिज हुने भएको छ। विकास बहल निर्देशित 'सुपर ३०' २५ जनवरीमा रिलिज हुने भएको छ।
‘सकेको तिरौंला, नत्र फिरिमा !’ शनिबार, भदौ २, २०७५
'गोल्ड'ले पहिलो दिनको कमाइमा 'सत्यमेव जयते' लाई उछिन्यो शुक्रबार, भदौ १, २०७५
भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारी १५ अगस्टमा दुई फिल्म रिलिज भए, अक्षय कुमार अभिनीत 'गोल्ड' र जोन अब्राहमको 'सत्यमेव जयते' । रिलिजको दिनमा कमाइको हिसाबले अक्षयले जोनलाई पछि पारेका छन् ।
नवाजुद्दीन विवादित लेखकको भूमिकामा 'मन्टो' मा देखिँदै बुधबार, साउन ३०, २०७५
नवाजुद्दीन सिद्दीकीको मुख्य भूमिका रहेको 'मन्टो' को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ ।
सिरियलका 'कृष्ण' पहाडमा ध्यान शिविर चलाउँदै बुधबार, साउन ३०, २०७५
एक समय भारतीय टिभी च्यानलमा प्रसारण हुने सिरियल 'श्री कृष्ण' हेर्नुभएको थियो भने ठूलो अनुहारका हँसमुख कृष्णको छवि तपाईंको स्मृतिमा ताजै होला।
अँध्यारोबाट उज्यालिएकी आश्ना बुधबार, साउन ३०, २०७५
अवसादको ऐंठनलाई कला मार्फत अभिव्यक्त गर्छिन् र शान्त हुन्छिन्, आश्ना ।
रणवीर-दीपिकाको विवाहको मिति तय मंगलबार, साउन २९, २०७५
प्रेम सम्बन्धमा रहेका बलिउड स्टार रणवीर सिंह र दीपिका पादुकोणको विवाह लामो समयदेखि बलिउडमा चर्चाको विषय बनिरहेको छ । यसै क्रममा यी दुईबीचको विवाहको मिति तय भएको खबर आएको छ ।
श्रीदेवीका ५ किस्सा: ४ वर्षको उमेरमा डेब्यू, हलिउड फिल्मको प्रस्ताव अस्वीकार सोमबार, साउन २८, २०७५
बलिउड अभिनेत्री श्रीदेवीको १३ अगस्ट अर्थात् आज ५५औं जन्मजयन्ती हो । उनको जन्म १९६३ मा भएको थियो ।
वीरगञ्जमा दुईदिने नेपाल–भारत साहित्य महोत्सव सोमबार, साउन २८, २०७५
पर्साको वीरगञ्जमा दुईदिने नेपाल–भारत साहित्य महोत्सव भइरहेको छ ।
अभिनयमा मेरो कुनै सूत्र छैन: मनोज बाजपेयी सोमबार, साउन २८, २०७५
मनोज बाजपेयी अब्बल अभिनयले विशेष छाप छाड्ने बलिउड अभिनेता हुन्। आर्ट फिल्म र व्यावसायिक फिल्मको बीच सन्तुलन राखेर काम गर्दै आएका उनको नयाँ फिल्म 'सत्यमेव जयते' १५ अगस्टमा रिलिज हुँदैछ।
पोखरामा फाइनप्रिन्टको एकदिने साहित्य महोत्सव आइतबार, साउन २७, २०७५
प्रकाशन संस्था फाइनप्रिन्टले २ भदौमा पोखरामा एकदिने घुम्ती साहित्यिक महोत्सव आयोजना गर्ने भएको छ ।
रणवीर सिंह रहेको 'तख्त' रणवीर कपूरले गरे अस्वीकार आइतबार, साउन २७, २०७५
करण जौहरको ड्रिम प्रोजेक्ट 'तख्त' फिल्ममा रहने कलाकारहरुको घोषणा भइसकेको छ। पिरियड ड्रामा यस फिल्मको कलाकारको सूचीमा रणवीर सिंह, करिना कपूर खान, आलिया भट्ट, विक्की कौशल, भूमि पेडनेकर, जाह्नवी कपूर र अनिल कपूरको नाम रहेको छ।
क्यान्सरबाट पीडित अभिनेता इरफान खानलाई छैटौं किमो दिइँदै शुक्रबार, साउन २५, २०७५
बलिउड अभिनेता इरफान खान पछिल्लो समय बेलायतको लन्डनमा क्यान्सरको उपचार गराइरहेका छन्।
अमरीश पुरीका नातिले बलिउडमा डेब्यू गर्दै शुक्रबार, साउन २५, २०७५
पर्दामा आफ्नो भयानक अवतारबाट सबैलाई डरमर्दो पार्ने बलिउडका अभिनेता अमरीश पुरीका नाति वर्धनले फिल्ममा मुख्य भूमिकामा डेब्यू गर्ने भएका छन्।
दर्शकले राम्रो कथावस्तु हेर्न खोजेका छन्: श्रद्धा कपूर शुक्रबार, साउन २५, २०७५
बलिउड अभिनेत्री श्रद्धा कपूरले दर्शकले फिल्ममा स्टारभन्दा पनि राम्रो कथावस्तु हेर्न चाहेको बताएकी छन्।
बलिउडमा अनुशासनको धेरै अभाव छ : कमल हसन विहीबार, साउन २४, २०७५
फिल्म क्षेत्रका साथै राजनीतिमा सक्रिय कमल हसनको परिचय निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक, गीतकार, पार्श्व गायक लगायत विविध क्षेत्रमा फैलिएको छ।
'धडक' पछि श्रीदेवीकी छोरीलाई मल्टिस्टारर फिल्मको अवसर विहीबार, साउन २४, २०७५
डेब्यू फिल्मबाटै जाह्नवी कपूरले यतिबेला बलिउडमा तारिफ बटुलिरहेकी छन् । 'धडक' फिल्मका लागि राम्रो प्रतिक्रिया पाएकी उनको पोल्टोमा अर्को ठूलो प्रोजेक्ट आएको छ ।